Nyefee Photos, Ndi ana-akpo, Video na Music si iPod ka iPhone
Otú nyefee music / video / foto site na iPod Touch ka iPhone
Na-ebufe data site na otu IOS ngwaọrụ dị ka iPod aka ka iPhone bụ a nkịtị ọrụ ahụ a rụrụ site ọrụ kwa ụbọchị na maka otu ihe ahụ e nwere ọtụtụ iri puku software omume na ike ga-eji na nke a iji jide n'aka na nyefe na-eme na a ire ụtọ na otu ebe n'ụzọ bụ nke na-efe ọsọ. Na a na nkuzi na mfe ma dị mfe ụzọ nke na-ebufe data si iPod ka iPhone na-kọwara n'ụzọ zuru ezu iji hụ na onye ọrụ mgbe chere ihu ọ bụla nke ka na-enyefe data n'etiti ngwaọrụ. Ọ bụkwa uru banyere na onye ọrụ nwere ime ka nhọrọ kasị mma dabere na ya mkpa na choro.
Nkebi nke 1: otú nyefee music / video / foto site na iPod ka iphone iji iTunes
Part 2: iPod Touch ka iPhone wiht otu click
Part 3: Olee na-atụgharị iPod aka ka iPhone
Ọ bụ a dị mfe usoro n'ihi na ndị niile mkpa iji jide n'aka na nyefe na mere kpọmkwem n'otu ụzọ ahụ ha chọrọ nke nwekwara pụtara idebe photos ke otu iji. Iji nweta results mfe ọ na-gwara iji jide n'aka na nzọụkwụ kwuru na a nkuzi na-soro nzọụkwụ site nzọụkwụ nke mere na onye ọrụ nwere ike inweta uru nke egwu atụmatụ na-ọkọnọ site iTunes na nke a. A na-ghar software omume ike ga-eji nyefee media faịlụ nile di iche iche site na otu IOS ngwaọrụ ọzọ na kwa Mac na PC. Ọ nwekwara ike na-echekwa media na nchekwa nke na-abịa na ya na mgbe ahụ, a media nwere ike synced na handheld ngwaọrụ nke ọ bụla genre. Iji jide n'aka na iTunes-n'ụzọ zuru ezu tinye n'ọrụ onye ọrụ kwesịrị iji na-eso nzọụkwụ n'okpuru.
Nzọụkwụ 1.The iPod aka bụ na-jikọọ na PC iji jide n'aka na usoro a malitere na n'otu ụzọ ahụ dị chọrọ.
Nzọụkwụ 2.Once ngwaọrụ e jikọọ onye ọrụ kwesịrị ẹkedori iTunes omume na e arụnyere na n'elu usoro. Ọ ga-chọpụta ngwaọrụ-akpaghị aka na onye ọrụ nwekwara ike ime ka n'aka na ngwaọrụ na-emi odude dị ka mma.
Nzọụkwụ 3.On n'elu ụlọ mmanya onye ọrụ kwesịrị iji jide n'aka na mkpa media ụdị na-ahọrọ dị ka e gosiri na ọnụ ọgụgụ n'okpuru. Ọdịnaya ga-gbapụta na onye ọrụ nwekwara ike ime ka n'aka na ọdịnaya bụ ka a kpọfere iTunes họrọ.
Nzọụkwụ 4.The ọzọ na ihuenyo na Pop elu ga-dị iche iche nhọrọ site na nke onye ọrụ kwesịrị ka họrọ "Iji aka jikwaa music na vidiyo".
Nzọụkwụ 5.On ọzọ eji ihuenyo onye ọrụ kwesịrị ka jide n'aka na itinye button a pịrị ịzọpụta mgbanwe na mezue transfer nakwa dị ka media syncing. Usoro agwụ ebe a dị ka mma.
Nzọụkwụ 6.Using otu usoro n'elu onye ọrụ kwesịrị ka ịgbakwunye iPhone ka Mac / PC iji jide n'aka na iTunes ịchọpụta ngwaọrụ na mgbe ahụ mkpa ijide n'aka na mgbasa ozi na na e synced site na iPod na-agafere ka iPhone na mfe n'ụzọ nke bụ hassle free n'ụzọ nile. Kpọmkwem otu nzọụkwụ na-kwuru n'elu bụ ga-agbaso.
Nkebi nke 2: iPod Touch ka iPhone Transfer- Wondershare MobileTrans
Ọ bụ doro anya na ihe kasị mma software omume na bụ dị na ahịa na maka otu ihe ahụ ọ na-họọrọ ọtụtụ iri puku ndị ọrụ n'ụwa nile nke na-egosi na-ewu ewu na mkpokọta ịsọ mpi nke software. Usoro a ga-soro kwuru n'okpuru ebe a.
Nzọụkwụ 1.The omume bụ na-ibudatara na URL http://www.wondershare.com/phone-transfer/ na mgbe na-esonụ kpaliri onye ọrụ kwesịrị iji wụnye na ẹkedori ya.
Nzọụkwụ 2.Once na iPod na iPhone jikọọ na usoro mmalite oyiri button bụ na-kụrụ.
Nzọụkwụ 3.The ọzọ window ga-egosi na transfer site na otu ngwaọrụ ọzọ enweghị ihe ọ bụla nsogbu na ọ bụ ihe niile mere na nanị otu click.
Nzọụkwụ 4.By iji usoro a onye ọrụ nwere ike nyefee data site na otu iPod ka iPhone enweghị ihe ọ bụla nsogbu.
Nkebi nke 3: Olee otú na-atụgharị iPod aka ka iPhone
Ndị ọhụrụ iPod aka nakwa dị ka iPhone bụ fọrọ nke nta yiri na ọ bụrụ na mmadụ chọrọ iji tọghata iPod ka iPhone ọ bụ ezigbo mfe ọrụ nke na-adịghị na-agụnye ọrụ ọ bụla ma ọlị. All a onye ọrụ kwesịrị ime bụ ime ka n'aka na ihe kasị mma ngwa ọdịnala dị ka nke ọma dị ka nwere ụfọdụ mmezi ngwaike arụnyere na-nzube n'ime oge ọ bụla ma ọlị. Na iPod nanị efu atụmatụ na a ga-kwukwara bụ a ekwentị dabeere ngwa nwere ike iji mee ka oku. Ndị a ngwa ọdịnala na-mara dị VoIP ma ọ bụ olu n'elu IP ngwa ọdịnala nke nwere ike arụnyere na otu click site na Apple si na ngwa ahịa. Kasị nkịtị VoIP ngwa na ike ga-eji na nke a bụ Skype nke maa achoghidi Intro mgbe niile. Tụkwasị na nke a ngwa Line 2 ngwa na-aghọ esiwanye-ewu ewu n'etiti ndị ọrụ na ike ga-eji dị ka onye ọzọ. The chọrọ ndị a ga-emezu na nke a dị ka ndị a:
2.Wi-Fi na ngwaọrụ na-arụsi ọrụ ike njikọ. SIM ma ọ bụ ụgbọelu internet nwekwara ike-eji na-aga.
3.iPod headset nke na-abịa na ngwaọrụ. Ọ nwekwara ike zụrụ ọ bụla na apple ụlọ ahịa.
4.A VoIP ngwa na-eji ime ka oku. Ọtụtụ n'ime ndị yiri ngwa ọdịnala na-agbakwunyere na SMS ma ọ bụ ozi atụmatụ. Nke a na atụmatụ ike ga-eji dị ka onye ọzọ na wuru na SMS ọrụ nke iPhone.
Mgbe ọ na-abịa uru mgbe ahụ na ha bụ otú ọtụtụ na ole na ọ gaghị ekwe omume depụta ha niile ebe a, Otú ọ dị ụfọdụ n'ime ndị a dị ka ndị a:
1.The ego nke onye nwere iji kwụọ ụgwọ maka ịzụta iPhone ga-azọpụta ma ọ bụ nnukwu uru niile ugboro.
2.The headset nakwa dị ka ndị ọzọ na atụmatụ na-arụ ọrụ n'otu ụzọ otú onye ọrụ nwere ike-enwe otu ahụmahụ dị ka nke onye na iPhone.
3.The cellular ma ọ bụ ụgbọelu oku n'ikuku metụtara mbipụta na-tutu amama ozugbo na maka ihe nile na maka otu ihe ahụ naanị mgbe nile internet bụ ihe a onye ọrụ kwesịrị ịchọ.
> Resource> iPhone> Nyefee Photos, kọntaktsị, kalinda, iMessage, Video na Music si iPod ka iPho